ဓမ္မရသ: February 2009
စာရေးသူသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုခု သို့တည်းမဟုတ် အရာဝတ္တုတစ်ခုခုကို မျက်စိရှေ့မြင်မှု၊ တွေးမှု ဖြစ်ပေါ်လာချိန်တွင် ကပ်ရပ်ဖြစ်လာတဲ့ မနောစိတ်က မကောင်းတဲ့စိတ်။ ဥပမာ. ကားမောင်းနေရင်းက တစ်ယောက်က ရှေ့ကဖြစ်ရင် .. တိုက်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ဓါးကို ကိုင်ထားချိန် တစ်ယောက်ကို ထိုးလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ စသည်ဖြင့် မကောင်းတဲ့စိတ်က ကပ်ကပ်ပါလာပါတယ်။ သတိဝင် ၀င်ခြင်း ချက်ချင်းကို ပြန်ထိန်းပေမယ့်။ မနောစိတ်က ဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ စာရေးသူ သိချင်တာက ထိုစိတ်သည် အကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလား။ ထိုစိတ်ပျောက်အောင် မည်ကဲ့သို့ စိတ်ကို လေ့ကျင့်ရပါမည်နည်း။ စာရေးသူသည် တစ်ခါမှ တရားစခန်းဆိုသည်ကို မ၀င်ဘူးပါ။ တရားထိုင်ခြင်းကိုလည်း မပြုလုပ်ဖူးပါ။ ထို့ကြောင့်များ စိတ်က ပျံ့လွင့်လွယ်ခြင်း ဖြစ်သလား။ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။
မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးပါပဲ။ ကျနော်လည်း တရားစခန်း မ၀င်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ တရားဓမ္မတွေ၊ စာအုပ်တွေကို နာကြား၊ ဖတ်မှတ်ပြီး ကျင့်ကြံနေဆဲပါ ခင်ဗျာ။ မေးခွန်းတွေဖြေတဲ့ နေရာမှာ ဖြေတဲ့သူအနေနဲ့ အင်မတန် ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး အသိမှား၊ အမှတ်မှားဖြစ်အောင် ရေးမိ၊ ပြောမိတယ်ဆိုရင် အပြစ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်လည်း သိထားတဲ့ အသိလေးတွေကို အမှား မဖြစ်ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းပြီး ပြောပြတာပါ။
ကားမောင်းနေရင်းက တစ်ယောက်က ရှေ့ကဖြစ်ရင်း.. တိုက်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ဓါးကို ကိုင်ထားချိန် တစ်ယောက်ကို ထိုးလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ စသည်ဖြင့် မကောင်းတဲ့စိတ်က ကပ်ကပ်ပါလာ ပါတယ်။ သတိဝင် ၀င်ခြင်း ချက်ချင်းကို ပြန်ထိန်းပေမယ့်။ မနောစိတ်က ဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ စာရေးသူ သိချင်တာက ထိုစိတ်သည် အကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလား။
ဒီနေရာမှာ ကားနဲ့ တိုက်လိုက်ချင်တာ၊ ဓါးနဲ့ထိုးလိုက်ချင်တယ် ဆိုတာက မကောင်းတဲ့ စေတသိတ်လေးတွေ လာကပ်တဲ့ သဘောလေးပါ။ အခု လောကီနယ်ပယ်မှာ ငါ၊ ငါ့ဟာ၊ သူတပါး ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ မြင်နေတာကိုက ဒိဋ္ဌိနဲ့ မြင်တဲ့ အမြင်ပါ။ အမှန်တရားမှာ ခန္ဓာငါးပါးပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကို ခွဲကြည့်ရင် ရုပ်ခန္ဓာ တစ်ပါးနဲ့ နာမ်ခန္ဓာလေးပါး ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို အများသိတာက ရုပ်၊ နာမ် ဆိုတာပေါ့။ စိတ်နဲ့ စေတသိတ် ပေါင်းပြီး နာမ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်ရဲ့သဘာဝက အကြည်ဓာတ်လေးပါ။ အဲဒီ စိတ်အကြည်ဓာတ်ကို စေတသိတ်က ၀င်ကပ်ပြီး ခြယ်လှယ်တဲ့ အခါကျတော့ စိတ်တွေ ဖြစ်ကြရတယ်။ ကောင်းတဲ့ စေတသိတ် ကပ်တော့ ကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်တယ်။ မကောင်းတဲ့ စေတသိတ် ကပ်တော့ အကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်ရတယ်။ ကားနဲ့ တိုက်လိုက် ချင်တာ၊ ဓါးနဲ့ ထိုးလိုက်ချင်တာတွေက ဒေါသမူ စိတ်လေးတွေ ဖြစ်တဲ့ သဘောပါ။ အကုသိုလ် စေတသိတ်လေးတွေ လာလာကပ်တာပေါ့။ ဒါကို ရှင်းအောင်ပြောရရင် အကုသိုလ် စိတ်တော့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သတိနဲ့ ကပ်ပြီး သိလိုက်တဲ့ အတွက် ရှေ့က ဖြစ်တဲ့ စိတ်သည် နောက်ဆက်ဖြစ်မယ့် အကုသိုလ် တရားတွေကို ထိန်းပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကံတစ်ခုကို ကျူးလွန်ရာမှာ ကာယကံ၊ မနောကံ၊ ၀စီကံ စတဲ့ ကံသုံးပါနဲ့ ကျူးလွန်မိတာပဲ ရှိတာပါ။ ဒီလို ကျူးလွန်တဲ့ နေရာမှာ ကာယကံနဲ့ ၀စီကံကို ကျူးလွန်မိတယ်ဆိုရင် ကံ အရာက အပြီးမြောက်ပါတယ်။ ပြန်တောင်းပန်လို့ မရတော့တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့၊ မနောကံနဲ့ ကျူးလွန်မိရင်တော့ ပြန်တောင်းပန်ရင် အပြစ်က သက်သာရပါတယ်။
ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းက သောရိယ ဆိုတဲ့မြို့မှာ သူဋ္ဌေးသား တယောက်ရှိပါတယ်။ တနေ့တော့ မြစ်ဆိပ်မှာ ရေချိုး နေစဉ် ရဟန္တာတစ်ပါး ကောင်းကင်က ပျံကြွသွားတာကို မြင်ပြီးတော့ ငါ့မိန်းမရဲ့ အသာအရေဟာ ဒီ ကိုယ်တော်လို ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်က ပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့ သောရိယမြို့က သူဋ္ဌေးသားဟာ မိန်းမ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူဋ္ဌေးသားဟာ ရှက်ပြီးတော့ မြို့ကို မပြန်တော့ပဲ တခြားမြို့ တမြို့သွားပြီးနေပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားနှစ်ယောက် မွေးပါတယ်။ တနေ့တော့ အရင်မြို့က ကုန်သည်တယောက်က သူဋ္ဌေးသား အိမ်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူဋ္ဌေးသား (အမျိုးသမီး ဖြစ်သွားတဲ့သူ) က ဧည့်ဝတ်ကျေအောင် ပြုစုပေးတယ်။ ဘာလို့ ဒီလောက်ဧည့်ဝတ်ကျေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရသလဲလို့ ကုန်သည်က အမျိုးသမီးကို မေးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအမျိုးသမီးက သူဟာ တချိန်က သောရိယမြို့က သူဋ္ဌေးသား ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းတပါးကို ပြစ်မှားမိတဲ့ အတွက် ယခုလို မိန်းမ ဖြစ်သွားရကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကုန်သည်က စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားတာဆို ရင် တောင်ပန်းလို့ ကျေနိုင်ကြောင်းပြောပြီး ရဟန္တာဆီကို ခေါ်သွားပါတယ်။ အမျိုးသမီးလည်း ရဟန္တာနဲ့တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ သူက မြစ်ဆိပ်မှာ ရေချိုးစဉ် စိတ်နဲ့ ပြစ်မှား မိကြောင်း ၀န်ခံပြီး တောင်ပန်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ရဟန္တာက ကျေနပ်ခွင့်လွတ်ကြောင်း ပြောလိုက်တာနဲ့ မိန်းမ အသွင်ကနေ ယောကျာ်း အသွင်ကို ပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒီတော့ မနောကံနဲ့ ပြစ်မှား မိရင် ကျေအေး နိုင်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။
ဘုရားရှင်က ဟောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ သတ္တ၀ါတို့ရဲ့ စိတ်ဆိုတာ မကောင်းမှုမှာ မွေ့လျော်တတ်ပါတယ်။ လက်တစ်ဖျစ် အတွင်းမှာပဲ စိတ် ကုဋေတစ်သိန်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ထိုဖြစ်တဲ့ စိတ်ကလည်း ဖြစ်ပြီး ချုပ်ရတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဒါကို ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မြင်ရခက်သွားနိုင်တယ်။ ဥပမာ.. ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က သင်တဲ့ သက်တန့်ရောင်စဉ် (၇) ခုကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီ (၇)မျိုး ရောင်စဉ်ကို တရစပ်လည်အောင် လှည့်လိုက်ရင် အဖြူရောင် တခုတည်းလို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒီသဘောအတိုင်းပါ။ စိတ်တွေ တရစပ်ဖြစ်နေတော့ စိတ်ဆိုတာ အကောင်အထည်ကြီး၊ ဒီစိတ်ကြီးပဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ် ထင်နေကြရတာပါ။ ဒါကြောင့် ဘာစိတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခဏလေးနဲ့ ဖြစ်ချုပ် ဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ် ဆိုတာ သိထားရမယ်။ သိတဲ့ အတိုင်းလည်း ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ်နဲ့ ထိုးထွင်းမြင်အောင် ကြည့်နေရမယ်။ ရှုတယ်၊ သိတယ်၊ ကြည့်တယ် ဆိုတာသည် သဘောကတော့ အတူတူ ပါပဲ။
စိတ်ဖြစ်လိုက်လို့ အကုသိုလ်ဖြစ်လား ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်လိုက်တဲ့ စိတ်အပေါ်မှာ သတိမရှိပဲ ထင်ရာစိုင်းပြီး ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြစ်ဖြစ်ရတာပေါ့။ ပုထုဇဉ် သဘာဝအရ စိတ်တွေကတော့ ဖြစ်ရမှာပဲလေ။ ဒီတော့ ဘာစိတ်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က အသိလေး ရှိနေရမယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ကို ကိုယ်က သတိထား၊ ၀ိရိယစိုက်ပြီး ပညာမျက်စိနဲ့ သူ့ရဲ့ သဘောကို စောင့်ကြည့်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ရဲ့ သဘာဝအရ ပျက်တဲ့ လက္ခဏာကို တွေ့ရမှာပဲ။ ဒီအတွက် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးက သတိထား၊ ၀ိရိယစိုက်၊ ဉာဏ်နဲ့ ကြည့်လို့ ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒီတရားစကားသည် ကျနော်တို့ တွေအတွက် အဖိုးဖြတ်လို့ မရနိုင်တဲ့ စကားပါပဲ။
ပထမတော့ ကိုယ်က ကားမောင်းရင်း သတိလေးထားနေမယ်၊ ဓါးကိုင်ထားတာကို သတိလေး ထားနေမယ် ဒါကို အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ ကားနဲ့ တိုက်ချင်တဲ့ စိတ်လေးပေါ်လာရင် ဒီစိတ်လေးကို သိပေးနေလိုက်ပါ။ သူရဲ့ သဘာဝကို ကိုယ်က အကဲခက် သုံးသပ်ပြီး နေလိုက်တော့ သူသည် ပျက်စီးတတ်တဲ့ သဘောပါလား ဆိုတာ မြင်သွားတာပေါ့။ အပျက်ကို မြင်သွားတဲ့ အချိန်ကျတော့ ကိုယ်က ကားနဲ့ တကယ်တိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သင်္ခါရတရားတွေကို မပြုလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဥပမာ.. ကိလေသာရန်သူကတော့ ကိုယ့်ကို တိုက်ဖို့လာတာပေါ့။ ဒါကို ကိုယ်က သတိရှိပြီး ပြန်မတိုက်တော့ပဲ အယုံသွင်းလို့ သူ့လူ ကိုယ့်ဘက်သား လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ကိုယ်က ဒီသဘောကို မသိပဲ တိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း ခံစားသွားရမှာပဲ။ ဒီလို တုန့်ပြန်တာသည် ဉာဏ်မွဲသူတွေ အလုပ်ပါ။ ကိုယ်က သတိလေးထားပြီး စောင့်ဖမ်းလိုက်တော့ ရန်သူက မိတ်ဆွေဖြစ်ရပြီပေါ့။ ဒါသည် ဉာဏ်ဦးသွားတဲ့ သဘောပါ။ အပျက်ကို သိတော့ သင်္ခါရတရားတွေ ဆက်ပြီး မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ သင်္ခါရချုပ်တော့ ကံချုပ်တယ်။ ကံချုပ်တော့ သံသရာပျက်တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိပေးဖို့ အဓိက ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးက အသေမဦးခင် ဉာဏ်ဦးအောင် ကြိုးစားကြလို့ ဆုံးမခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် ဘ၀တွေမှာ ဘာစိတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့သဘောကို စောင့်ကြည့်တဲ့ သတိလေးနဲ့ နေနေတာကို ၀ိပဿနာ အသိနဲ့ နေတယ်လို့ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါသည် အမြတ်ဆုံးသော ဘ၀နေနည်းပါ။ ထို့အတူ သေနည်းသည်လည်း ဒီအတိုင်းပါ။
တောရှုပ်လေ၊ ထင်းရလေ ဆိုတဲ့ သဘောလေးကို မှတ်ထားပါ။ ဓါးပါဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ ဓါးမပါတဲ့သူကတော့ ချုံတွေနဲ့ ငြိရမှာပဲ။ တောရှုပ်တယ်ဆိုတာ ကျတော်တို့ လောကီမှာ အာရုံတွေက အင်မတန်ရှုပ်လွန်းတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကို ကိုယ်က မသိပဲ အာရုံအလိုက်မှားရင်တော့ ကိလေသာ ချုံမှာ ငြိရမှာပါ။ ဓါးပါတဲ့ သူကတော့ ထင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဓါးဆိုတာကတော့ သတိတရားပါပဲ။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာ အချိန်တိုင်း သတိလေး နဲ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဓါးရှိပြီး ခုတ်ဖို့ လိုသလို သတိရှိပြီး သိဖို့လိုပါတယ်။ ခုတ်လေ ထင်းရလေ ဆိုသလို အသိရှိလေ ချမ်းသာလေပါပဲ။
ဒါဆိုရင် မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပြီး ဖြစ်ပါပြီ။ လက်တွေကျင့်သုံး လိုက်နာကာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ရရှိ ခံစားနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 24.2.097ရေးသားခဲ့ရန်
လာရောက်ဖတ်ရှုပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဒီက ဆရာ/မ တွေကို သင်ခန်းစာ ခဏတာနားတဲ့ အချိန်မှာ ပြောပြခြင်တယ်။ ရှင်းပြဖို့ရာက နည်းနည်းတော့ အခက်ခဲရှိတယ်... ပြောပြခြင်တာထက် ကိုယ်ကိုတိုင်က ကောင်းကောင်းမသိတာခတ်နေတယ်.:D.
ဗုဒ္ဓရဲ့ ရဟန်းတော်တွေ ပတ်သတ်ပြီးပြောပြခြင်တာ.. .ဖြစ်နိုင်ရင် အခြားဘာသာတွေမှာ မရှိမမြင်နိုင် မတွေ့ဖူးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ပြောပြခြင်တာ... ကျွန်တော်တို့ အရင်တုန်းက ကြားဖူးတဲ့ အရာလေးတစ်ခုပါ..ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး... နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့ အခါမှာ ကောင်းကင် မှာ ရဟန်းတော်တွေ ကိုတွေ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ.. မကြာသေးခင်ကလို့ ပြောတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမှာ လည်း အဲဒီလို မျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ ရဟန်းတော် ပျံတတ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေ.. .အဲဒါမျိုးတွေကို ပြောပြခြင်တာ... ဘာသာရေးကို ကြွားဝါခြင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး... ဘာသာခြားလူမျိုး တွေကို ဒီလိုထူးဆန်း ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေနဲ့ မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အမှန်တကယ် ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးတွေ တကယ်လက်တွေ့ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို ပြောပြခြင်လို့ပါ... ဒီလိုထူးဆန်းဖြစ်စဉ်လေးတွေကို ဘုရားရှင် လက်ထက်ကမဟုတ်ပဲ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးတွေရှိရင် ပြောပြပေးပါ..
မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်သုံးသပ် မိတာလေးတွေကို ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေကို တဖက်က လုပ်နေရတဲ့ အချိန်လဲဖြစ်၊ စာအုပ်တွေ အကိုးအကားလဲ မစုံလင်တာကြောင့် ယခုမျက်မှောက်ခေတ် ထူးဆန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကြောင်းကိုလည်း အသေးစိတ်တော့ ကျန်တော် မရှင်းပြနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းကို ဦးတည်ချက်မလွဲအောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားဖြေလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဘာသာတရားကို ကိုယ်က ရှင်းပြချင်တာဆိုတော့ ပထမဆုံးကိုယ်တိုင် သိရှိထားအောင် လုပ်ထားရမယ်။ ကိုယ့်မှ မရှိထားရင် ဘာမှ ပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ.. သူများကို မုန့်ဖို့ ၅ ကျပ်ပေးမယ်ဆိုပါစို့.. ကိုယ့်မှာ ရှိမှ ပေးလို့ရမယ်။ သူများဆီမှာ၊ ဘဏ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ ပိုက်ဆံတွေက ကိုယ်ပိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဘယ်လိုပေးလို့ ရပါ့မလဲ။ ဒီသဘောလေးလိုပါ။ ဘုရားဟော ပိဋကတ်တော်တွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ တရားတွေ များစွာ ရှိတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဘာတရားမှ မရှိထားရင် ဘာကိုမှ ပြောတတ်မှာ မဟုတ်ပါ။ ပေးတတ်မှာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်က ပေးချင်တဲ့ သူဆိုတော့ ရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ ရှိဖို့ လိုအပ်ပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အရင်ချသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိမှ သူများကိုလည်း ပေးလို့ရမှာပဲလေ။ (ကျနော်လည်း ရှိနေ၊ သိနေလွန်းလို့ မဟုတ်ပါ။ ရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကို သိစေချင်လို့ပါ)။
ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေကို လက်တွေ့ကျင့်ကြံပြီးတော့ ထူဆန်းဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေ အကြောင်းပြောပြချင်တဲ့ သဘောလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ထူးဆန်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို အရင်ရှင်းပြပါမယ်။ မိုးပေါ်ပျံနိုင်တာ၊ မြေလျှိုးနိုင်တာတွေ ဆိုတာ သမထအားကောင်းလို့ ဈာန်၊ အဘိညာဉ်တွေရရင် ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။ ရဟန္တာတိုင်း ဈာန် မပျံနိုင်ဘူးဆိုတာလဲ မှတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ ဈာန်ရတိုင်းလည်း ရဟန္တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရမယ်။ မေးခွန်းမှာပါသလို မန္တလေးမှာ ရဟန်းတော် တပါး ပျံတတ်တာကို တွေ့တယ်ဆိုတာ ကျနော်လည်း ကြားဖူးပါတယ်။ ဟိုအရင် အင်္ဂလိပ် ခေတ်က လေယာဉ်မှူးတွေလည်း ကောင်းကင်မှာ ပျံနေတဲ့ ရဟန်းတော်တွေကို မြင်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း စာပေတွေမှ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲလို ပျံနေတာတွေသည် ရဟန္တာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လောကီ ကျင့်စဉ်တွေကြောင့် ဈာန်တွေရနေတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဒီလောက်နဲ့ တင်းတိမ်းဖို့ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ သစ္စာလေးပါးတရားတွေသည် ဒုက္ခခပ်သိမ်းငြိမ်းတဲ့ ငြိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ထူးဆန်းစွာ လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်း တန်းခိုးပြတာကို ပညတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ နောင်အချိန်မှာ တန်ခိုးမပြနိုင်ရင် လူတွေမကြည်ညိုစရာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်မြင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘုရားရှင် လက်ထက်ကတည်းက ရဟန်းတော်တွေ တန်ခိုးမပြရဆိုတာ ပညတ်ခဲ့တာပါ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်း လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှသာ တန်ခိုးပြတော်မူပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဇာတ်တွေကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီမှာ အဓိက မှတ်ရမှာက သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်သည် တန်ခိုးပြခြင်းကို တားမြစ် တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဘုရားရှင် မမွေးဖွားမီကပင် သုဒ္ဓေါဓန မင်းကြီး ကိုးကိုယ်တဲ့ ကာဠဒေ၀ီလ ရသေ့ကြီးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လောကီ အဘိညာဉ်ရပြီး ရှေ့ကမ္ဘာ(၄၀)၊ နောက်ကမ္ဘာ(၄၀) မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကာဠဒေ၀ီလ ရသေ့က ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ဖြစ်လို့ တာဝတိံသာ တတ်ပြီး ဆွမ်းခံလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဈာန်တွေ၊ အဘိညာဉ်တွေဆိုတာ သာသနာပမှာလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်။ ကျနော်တို့ ထေရ၀ါဒရဲ့ သာသနာသည်သာ သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါနတွေ၊ သီလတွေ၊ သမထတွေဆိုတာ အခြားဘာသာတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ၀ိဿနာ ဘာဝနာဆိုတာ ဘုရားပွင့်မှ သိခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသည် ၃၁ ဘုံဆိုတဲ့ တောအုပ်ထဲက လွတ်မြောက်ရာကို ပို့ဆောင်ပေးမယ့် အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားရမယ့်လမ်းကတော့ မဂ် (မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး) လမ်းပေါ့။ ဒါတွေကို ဆက်ပြောဖို့က ကိုယ်တိုင် အသိအားဖြင့် ကြွယ်ဝပြည့်ထားမှ ရပါလိမ့်မယ်။ အထူးအဆန်းဖြစ်တာကို ပြောဖို့တော့ ကျနော့် အနေနဲ့ အားမပေးချင်ပါ။ အထူးအဆန်းကို ယုံရင် အရူးအနှမ်းဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားလေးကို မှတ်သားထားမိပါတယ်။ ခက်တာက ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေကလည်း အထူးအဆန်းဆို ယုံလွယ်ကြတယ်။ ဥပမာ.. ပေါ်တော်မူ ဘုရားဆိုပြီး အရင်က လိမ်တာတွေရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ယုံလွယ်ကြတယ်။ ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န တရားမှာတော့ ပေါ်တော်မူဆိုတာ မှိုနဲ့ မျစ်ပဲ ရှိတယ်လို့ ဟောထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို တကယ်တမ်း လိုက်နာပြီး အားထုတ်သိမြင်တဲ့ ရဟန္တာကြီးတွေသည် အထင်ကြီး လေးစားမယ်ထင်တဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်တော့ပါဘူး။ မကြာခင်က ခန္ဓာဝန်ချသွားတဲ့ ရွာမွန် ဆရာတော်ကြီး ဆိုရင် ခန္ဓာဝန်မချမီ (၇) ရက်အလိုမှာ ဆန်ပြုတ်ဆွမ်းပို့နေကျ ဒကာကို ဒီကနေ့က စပြီး (၇) ရက် ကျောင်းတံခါး ပိတ်ထားလိုက်ဦးမယ်လို့ ပြောကာ ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ (၇)ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ တံခါးကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ကြည်ညိုစရာ အတုယူစရာပါပဲ။
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကို လူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ရန်ကုန်မှာ ရွှေဥမင် ဆရာတော်ကြီးနဲ့ မင်းကွန်းဆရာ တော်ကြီး ဆွမ်းစားတခုမှာ ဆုံပါတယ်။ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက ဆေးလိပ်ကိုင်ပြီး မီးညှိမယ် ဟန်ပြင်တဲ့ အခါမှာ ရွှေဥမင် ဆရာတော်ကြီးက မီးခြစ်ကိုဦးစွာယူပြီးတော့ မီးညှိပေးဖို့ ပြင်ပါတယ်။ ဒီတော့ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီး အရှင်ဘုရား ညှိပေးတဲ့ ဆေးလိပ်မီးနဲ့တော့ ဆေးလိပ်မသောက်ဝံ့ပါ ဘုရားဆိုပြီး ဆေးလိပ်ကို ပြန်ချခဲ့ပါတယ်။ ရွှေဥမင် ဆရာတော်ကြီးဆိုတာ ရဟန္တာလို့ မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်။
ဝေဘူဆရာတော်ကြီး၊ လယ်တီဆရာတော်ကြီး၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၊ စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး၊ မဟာစည် ဆရာတော်ကြီး၊ သဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီး စတဲ့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတွေသည် ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေ ကို လက်တွေ့ ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး (တချို့) ခန္ဓာဇာတ် သိမ်းခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေပါ။ ဒီဆရာတော်ကြီး တွေရဲ့ အကျင့်တွေမှာ ထူးဆန်းစွာနဲ့ လူတွေကို ပြသခဲ့တာ၊ မြင်စေခဲ့တာမျိုးကို လေ့လာ မတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီအကျင့်တွေ အသိတွေဆိုတာ ကျနော်တို့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ချင်းတောင် လူတိုင်းကို ပြောလို့ မရပါဘူး။ နိမ်ပြောတဲ့ သဘောမဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ တချို့က ပုတီးစိပ်၊ ဘုရားသွားတာလောက်ပဲ အဟုတ်ထင် နေကြတာကို။ သစ္စာတရား ၀ိပဿနာတရားတွေဆိုရင် နာခံချင်တဲ့သူက နည်းပါတယ်။ ဒီတော့ အခြားဘာသာဝင် ဆိုတာက ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။
အကြံပြုချင်တာက.. ထူးဆန်းတာတွေ ပြောတာထက် ကံ ကံ၏ အကျိုးအကြောင်းကို အရင်ပြောကြည့်ပါ။ ဒါကိုလက်ခံ ယုံကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြောကြည့်ပေါ့။ ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံပဲလေ။ ဘာသာ စကားတော့ အခက်ခဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့လည်း ပြောကြည့်ပါတယ်။ သူတို့က သံဃာတော်တွေ ဆွမ်းခံထွက်တာကို တောင်းတယ်လို့ပဲ ထင်နေတာပါ။ အရင်ဆုံး ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ယုံကြည်ပြီ ဆိုမှ သီလစောင့်ထိန်းတာတွေ ဆက်ပြောသင့်တယ်။ နောက်မှ အခြားဘာသာတွေမှာ မရှိသေးတဲ့ သစ္စာတရား တွေကို ပြောပြတာ သင့်တော်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဥပမာ ဆောင်ပြောရရင်.. နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးရင် ကိုယ့်လက်သီးလဲ နာရမှာပဲ။ အထိုးခံရတဲ့ အရာဝတ္ထုက ချွန်ထက်ရင် ပိုပြီးနာကျင်မယ်။ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်မှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ နိယာမ အရ ပြောကြည့်ပါ။
တရားတော်ကို ဆောင်ယူကျင့်သုံးလို့ ရောဂါပျောက်ရတာတွေ၊ အန္တရာကင်းတာတွေ ကတော့ အများအပြား ရှိတာပေါ့။ သမထတွေ လုပ်လို့ သမာဓိအားကောင်းရင် ဈာန်၊ အဘိညာဉ်တွေရပြီး မိုးပျံ နိုင်တာတွေလည်း ရှိကြတာ အမှန်ပါ။ အခြားဘာသာကို ပြောမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ စိတ်မှာ ဒီလို အထူးဆန်းဖြစ်ရုံပဲဆိုတဲ့ အသိဝင်မှာ စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် ဒါတွေကို အလေးပေးပြီး မပြောဖို့ အကြံပြုတာပါ ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ တရားဓမ္မတွေက ဒီထက်များစွာ တန်းဖိုးထိုက်တန်သော အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျနော့် ပြောချင်တဲ့ သဘောကို နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျနော် ရေးတဲ့ အထဲမှာ မရှင်းတာ ပါခဲ့ရင် မေးပါ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 23.2.094ရေးသားခဲ့ရန်
ဒီနေရာမှာ နားမရှင်းတာလေး တစ်ခုကိုထပ်သိလိုပါတယ်။ တရားသူကြီးတစ်ယောက်ဟာ တရားခံ တစ်ယောက်ကို (သေဒဏ်ပေးနိုင်လောက်သော) အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါဟာ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်နိုင်ပါသလဲ။ သာမန်အမြင်မှာ နှစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပါ..။
(၁) (သေဒဏ်ချမှတ်သင့် လောက်သော) အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေဒဏ်ဟု အမိန့်ချခြင်းသည် သေစေလိုသော စိတ်ပါနေတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
(၂) နောက်တစ်မျိုးက တရားဥပဒေမှာ သာမန် သေဒဏ်နဲ့ မသေမချင်း သေဒဏ်နဲ့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သာမန် သေဒဏ်အတွက် အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ မသေမချင်း သေဒဏ်အတွက် ကျတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ? သေစေချင်တဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ ဆိုသည့်တိုင် မသေမချင်းသတ်စေဆိုတဲ့ အမိန့်က သေစေချင်တဲ့ စိတ် (သို့မဟုတ်) စကားဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးမရှင်းတာတစ်ခုက သူငယ်ချင်းအထက်က ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်...။ အခုလိုတာဝန်မျိုးကို ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ ၀န်ထမ်းအားလုံး (တပ်မတော်သား၊ ရဲ၊ တရားသူကြီး၊ ကြိုးသမား) အားလုံးဟာ ကိုယ့်ငရဲ (ငရဲမဟုတ်တောင် အနိမ့်ဆုံး အကုသိုလ်၊ ၀ဋ်ကို) ကိုယ့်ဘာသာ ယူနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်..။ တိုင်းပြည်တစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများဟာ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရှိကိုလဲ ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။ ဒီလိုဆိုရင် ဒီသဘောတရား (သို့) ဘာသာရေး အဆုံးအမ တစ်ခုဟာ ထိုကဲ့သို့ သော ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် (သို့) တာဝန်နှင့်အမိန့် အရ ထမ်းဆောင်ကြသူများအပေါ် တရားမျှတမှုရှိနိုင်ပါ တော့မလား?
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ...
ငါသိသလောက်လေး ဖြေပေးလိုက်တယ် သူငယ်ချင်း။ ဥပဒေ အကြောင်းတွေကို သေချာမသိတာ အမှန်ပါ။ တရားဆိုကတည်းက တကယ်ကို မျှတမှု၊ အေးချမ်းမှုရှိတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။
အမိန့်ချပေးရတာတွေ၊ တာဝန်တွေ အရထမ်းဆောင်နေရတဲ့ သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ပုထုဇဉ် လူသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုထုဇဉ် စိတ်ဆိုတာက အရိယာလို စိတ်ထားမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူတပါးကို သေစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာ မပါဘူး ဆိုရင်တောင် အနုသယ ဆိုတဲ့ တကယ့်အတွင်း စိတ်လေးမှာတော့ စေတနာ မပါပဲ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး။ ပုထုဇဉ် ဆိုတဲ့ အတွက် မိမိစိတ်ကို အပြီးတိုင် မနှိမ်နင်းနိုင်သေးတဲ့ သဘောပေါ့။ ( ပုထုဇဉ် ဆိုတာ… “ပုထု ကိလေသေ ဇနေတီတိ ပုထုဇနော” ကိလေသာများတဲ့သူကို ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာပါ )။ ဒီတော့ ကာယကံ၊ ၀စီကံတွေ ထိန်းနိုင်တယ်ထားဦး။ အနုသယ စိတ်ကိုတော့ ထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန် ခက်မယ်။ အဲဒါကြောင့် သေစေလိုတဲ့ စိတ်စေတနာ လုံးဝ မပါပဲ အပြစ်ပေးဖို့ဆိုတာ ပုထုဇဉ် လူသားတယောက် အနေနဲ့ အင်မတန် ခဲယင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
အရိယာတွေကျတော့ မဂ်စိတ်ကျပြီးရင် နောက်ဖြစ်တာတွေက ဖိုလ် စိတ်တွေဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီမှာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် အကျိုးပေးတွေ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဥပမာ၊..၊ ရဟန္တာတွေက တရားဟောလည်း ကုသိုလ် မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီနေရာမှာ ဥပမာလေးတွေ ပြောပြချင်တယ်။ ငါတို့ အားလုံးသိထားတဲ့ အဇာတသတ်ရဲ့ အဖေ သောတာပန် ဗိမ္ဗိသာရ မင်းကြီးဟာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာ စစ်တပ်ကို အားကိုးအားထားပြုကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ရာဇဂြိုလ်ပြည်ရဲ့ အစွန်အဖျားမှာ သူပုန်ထတဲ့အခါ သောတာပန် မင်းကြီးရဲ့ စစ်ထွက် မိန့်ခွန်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်သားတိုင်း မှတ်သားထားသင့်တယ်။
ဂစ္ဆေထဘဏေ - ပစ္စန္တံ ဥစ္စိနထ = အမောင်တို့ သွားချေကြ၊ သူပုန်ထ၍ ပျက်စီးနေသော အစွန်အဖျားရွာတွေကို စည်ကားအောင် စောင့်ရှောက်ချေကြ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်လောက်အပြစ်ကင်းတဲ့ စကား (စစ်ထွက်မိန့်ခွန်း)လဲ။ အဓိက လုပ်ရမှာက ဒါပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းကြီးရဲ့ စိတ်မှာရော၊ နှုတ်မှာပါ ဒေါသမပါဘဲ အပြစ်ကင်းနေတာကို အတုယူကြရမယ်။ သောတပန် ဆိုတာ ငါးပါးသီလကို အသက်နဲ့ လဲပြီး စောင့်ထိန်းနိုင်တဲ့ အထိ သဒ္ဓါတရားခိုင်မြဲပြီး ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကိစ္ဆာကို အပြီးတိုင် ပယ်သတ်ပြီးသားပါ။
ဒီနေရာမှာ သူပုန်တွေကို သေစေလိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူး။ တိုင်းပြည်သာယာရေးကို စိတ်က ဦးတည်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူသတ်ဖို့ စေခိုင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မရသလို။ ရဲမတ်တွေက သတ်ရင်လဲ ဘုရင်မှာ အပြစ်မရှိတော့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဘုရင် စစ်တပ်ရောက်လာတဲ့ အခါ ရန်သူတွေက အလိုလို ရှောင်ပြေးသွားတာပါပဲ။
ဝေသာလီက သီဟ စစ်သူကြီးဆိုရင်လည်း ရန်သူပေါင်းများစွာကို အောင်နိုင်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဆီမှာ တရားနာ တရားအားထုတ်တယ်။ အကုသိုလ်ကံတွေကို သောတာပတ္တိမဂ် ရအောင် အားထုတ်ပြီး တားဆီးတယ်။ သောတာပန် ဖြစ်ပြီးတော့မှ တိုင်းပြည်နဲ့ ဘုရင်ကြီးအတွက် မူလတာဝန်မှာ သစ္စာရှိစွာ ပြန်ပြီး ထမ်းဆောင်တာပါပဲ။
ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကို ဘာမှ မသိပဲ နေရာတကာမှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာနတွေ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင် နေမယ် ဆိုရင်တော့ အကုသိုလ် ဖြစ်ရမှာပါပဲ။ ဒီတော့ ဘယ်နေရာမဆို သိပြီးလုပ်တော့ သက်သာရာ ရသေးတာပေါ့။ မီးခဲကို မီးခဲမှန်းသိရင် ဘယ်သူကကိုင်မလဲ၊ ပူမှန်းမသိတော့ ကိုင်ကြတာပေါ့။ မရှောင်သာလို့ ကိုင်ရမယ်ဆိုရင်လဲ မီးခဲလို့ သိတဲ့ သူက အပူသက်သာအောင် လက်မှာ တခုခုခံပြီး ကိုင်မှာပေါ့။ ဒီသဘောအတိုင်းပဲ အကုသိုလ်မှန်း သိပေမယ့် လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တောင် သိထားတဲ့အတွက် စေတနာနည်းပြီး အကျိုးပေးနည်းပါမယ်။ ဒီတော့ ဘာသာတရားက မျှတမှု မရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာသာတရားကို မသိမှု (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အရဆိုရင် အ၀ိဇ္ဇာပေါ့) ကြောင့် မျှတမှု မရှိဘူး ထင်ရနိုင်တဲ့ သဘောပါ။
အရင်ကတော့ ဖြေပေးခဲ့သလိုပဲ လုံးဝ သီလစင်ကြယ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ တယောက်တည်းနေ တစိတ်တည်း ထားဆိုသလို တယောက်တည်းနေမှ ဖြစ်မှာပဲ။ နိုင်ငံတာဝန်နဲ့ မလုပ်တဲ့ သူတွေလဲ အကုသိုလ်နဲ့ လွတ်ကင်းတဲ့ အသက်မွေးမှုက အင်မတန်ရှားပါတယ်။ (သူငယ်ချင်း ကိုယ်တိုင်လဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ)။
လူတွေအတွက် သီလကျိုးပေါက်ခြင်း အတွက် ဖြေလို့ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ အမဲကံတွေ (အကုသိုလ်) ရှိနေတယ်လို့ ယူဆရင် အဖြူကံတွေ (ကုသိုလ်) များများ ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ အင်္ဂုလိမာလ ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်လိုမျိုး ၀ိပဿနာနဲ့ အရဟတ္တမဂ်ရအောင် လုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြေဆေပေါ။ အင်္ဂါ မစုံပဲမွေးလာခြင်းလိုမျိုး၊ ဆွံ့၊ အ၊ နားမကြားခြင်းမျိုး ၀ိပါက၀ဋ် ကိုတော့ ပေးဆပ်ရဦးမှာပေါ့။ ၀ိပါက၀ဋ်က ဘုရား၊ ရဟန္တာလဲ ရှောင်လို့ မရဘူး။ ၀ိဘက်တော် (၁၂)ပါး၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊ အရှင် သာရိပုတ္တရာတို့တော် ပြန်ခံကြရတာပဲ။
ဒါတွေကို သတိထားပြီး သာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင် (သို့) တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပါဏာတိပါတ ကံရဲ့ အပြစ်ကြီးတွေ မဖြစ်ရအောင်၊ အနည်းဆုံး တရားတစ်ဖက်၊ ဓါးတစ်လက် နဲ့ ဆိုတာမျိုး ဒေါသနည်းအောင် တာဝန်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မရှင်းတာပါရင် ထပ်မေးပါ သူငယ်ချင်း။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 23.2.097ရေးသားခဲ့ရန်
လူသားမှန်သမျှ ပုခက်နဲ့ ဝေးဝေးလာပြီး အသက်တွေ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သုဿန်နှင့် နီးနီးလာပြီ ဆိုတဲ့ အသိလေးကို အရင်ဆုံး စွဲမြဲကြပါ။ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးနေတာမဟုတ် သက်တမ်းတွေ ကုန်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပဲ စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ နေရေးအတွက်ပဲ အချိန်တွေကို အသုံးချ မနေသင့်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသင့်ပါပြီ။ လောကီလူသားတွေ ဖြစ်တာကြောင့် နေရေးလဲ ပြင်ပါ။ သေရေးကိုလဲ စဉ်းစားကြပါလို့ အလေးနက်ထားပြီး တိုက်တွန်းပါတယ်။ မိမိမှာ ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်တရားကို အားကိုးပြီးတော့ သေမှာလဲ။ နောက်ဆုံး သေခါနီးမှာ ဘယ်လို နှလုံးသွင်းနိုင်အောင် ပြင်ထားမလဲ၊ ဒါနတွေ ဘယ်လောက် ကောင်းခဲ့သလဲ၊ သီလတွေ ဘယ်လောက် စောင့်ထိန်းခဲ့သလဲ၊ ဘာဝနာတွေ ဘယ်လောက်ပွားများ ကျင့်ကြံနေလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို အလေးထား စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ ယခုအခါမှာ ဘာသာရေး ပြဿနာများ၊ အခြားသော အယူဝါဒများသည် ထေရ၀ါဒ သာသနာအတွက် ခြိမ်းခြောက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် ထေရ၀ါဒ မဟုတ်သော အယူဝါဒများ၊ ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ၊ နက္ခတ်၊ နတ်၊ ဘိုးတော်၊ စတဲ့ အယူအဆတွေကို လူအများ လက်ခံနေကြသည်မှာ သာသနာတော်ကို သွယ်ဝိုက်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ကျောခိုင်းနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတိရှိကြဖို့ သတိပေးခြင်းပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေသည် (၇)ရက် (၇)လီ မိုးမှောင်ကျနေတဲ့ တောကြီးထဲမှာ မျက်စိလည် လမ်းပျောက်နေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေနဲ့ တူပါတယ်။ မိုးမှောင်ကလဲကျ အလင်းရောင်ဆိုတာလဲ မရှိတဲ့ တောကြီးထဲမှာ ထွက်လမ်းကို ရှာကြရမှာက ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ပါ။ မှောင်နေတဲ့ အတွက် လမ်းတွေ့ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လျှပ်စီးလေးတချက် လက်လိုက်တာသည် ကျွန်တော်တို့ အတွက် တောထဲက လွတ်မြောက်နိုင်မဲ့ လမ်းကို တွေ့လိုက်တာပါပဲ။ ဒါကို မတွေ့လိုက်တဲ့ သူရှိနေရင် ခရီးသွားဖြစ်တဲ့ သူတွေက အချင်းချင်းဖေးမ ခေါ်ယူမှုကြောင့် ခရီးသွားဖော်တွေ အားလုံး တောထဲက လွတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားလေး အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်သူတို့တွေသည် ၃၁ ဘုံဆိုတဲ့ တောကြီးထဲမှာ မျက်စိလည် လမ်းပျောက်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ တူပါတယ်။ ဘုရားအဆူဆူ ပွင့်ခဲ့သော်လည်း သာသနာနဲ့ မတွေ့ကြုံခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တွေ့ကြုံခဲ့ သော်လည်း သာသနာကို ကျောခိုင်းခဲ့သူတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ယနေ့တိုင် ဘ၀တွေရပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရတာပါ။ ဓမ္မအလင်းရောင်နဲ့ ဝေးခဲ့ရတာပေါ့။ ဒါကြောင့် မိုးမှောင်ကျနေတဲ့ ညအချိန်ကြီးက ရှည်လျားခဲ့ပါပြီ။ ယခုလို သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ကြုံလိုက်တာသည် လျှပ်စီးလက်လိုက်တဲ့ အချိန်ပမာဏ မျှသာ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်က သာသနာကွယ်နေတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ တူပါတယ်။ လျပ်စီးလက်တာကို မြင်လိုက်တဲ့ သူက တောထဲမှာရှိတဲ့ ချောက်၊ သစ်ပင်၊ ချုံ၊ ထွက်လမ်း စသဖြင့် သိလိုက်သလို၊ သာသနာကို သိမြင်လိုက်တဲ့ သူကလဲ ဒါတွေက ကုသိုလ်၊ ဒါတွေက အကုသိုလ်၊ ဒါတွေက အပါယ်လမ်း၊ ဒါတွေက သံသရာက လွတ်လမ်း ဆိုတာကို သိမြင်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် လမ်းသိတဲ့ သူက ခရီးသွားတွေကို နှိုးဆော်ပြောပြသလို တရားဓမ္မကို သိမြင်သူတွေကလဲ သံသရာခရီးသွားတွေကို သတိပေး တိုက်တွန်းခြင်းပါ။ အတင်းဆွဲခေါ်လို့ရတဲ့ ခရီးစဉ်မျိုး မဟုတ်တာကြောင့် ခရီးသွားတွေ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်းစားစွာ လိုက်မှရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် လျှပ်စီးအလင်းရောင်နဲ့ တူသော ဘုရှားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားဓမ္မတွေကို နာကြားလိုက်နာပြီး တောထဲက ထွက်ရမဲ့ လမ်းကို လျှောက်လှမ်းကြရမှာပါ။ အဲဒီလမ်းကတော့ မဂ္ဂင်လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်တိုင်ပဲ သတိထား၊ ၀ိရိယစိုက်၊ ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီး လျှောက်လှမ်းကြဖို့ အသိပေးပါတယ်။
သာသနာနဲ့ တွေကြုံနေရတာသည် အခုအချိန်လေးပဲလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ အရင်က သာသနာ ထွန်းလင်းခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ မည်းမှောင်ခဲ့တော့ ကိုယ်က သာသနာနဲ့ မတွေ့သလိုပါပဲ။ အခုလဲ သာသနာနဲ့ ကြုံပေမဲ့ မလိုက်နာ မကျင့်သုံးရင်တော့ သာသနာ ကွယ်တဲ့ကာလမှာ ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ ထူးမခြားနားပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောင်ဆိုတာလဲ မသေချာတဲ့ အလုပ်ပါ။ လက်ရှိ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ နောက်ထပ်ပွင့်မည့် အရိမေတ္တယ ဘုရားရှင် ကျန်ပါသေးတယ်။ ထိုဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာကွယ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကျမှ ယခုကမ္ဘာကြီးက ပျက်စီးမှာပါ။ ဒီကမ္ဘာ ပျက်ပြီးတော့ ဖြစ်လာမယ့် ကမ္ဘာသည် သုညကမ္ဘာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုညကမ္ဘာဆိုတာ သတ္တ၀ါတွေ မရှိလို့ ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ အပါယ်လေးဘုံသားတွေ အပြည့်ရှိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားလဲ မပွင့်၊ ဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်လဲ မရှိပဲ ဆိတ်သုန်းနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကမ္ဘာမှာလဲ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ အပါယ်လေးဘုံသားတွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အပါယ်ရောက် ကြောင်း အကုသိုလ်တရားတွေ၊ လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်း ဒါန၊ သီလတွေ၊ ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ကြောင်း သမထ တရားတွေ ကျင့်သုံးနေကြလို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။ ထို ဒါန၊ သီလ၊ သမထ တရားတွေဟာ ကမ္ဘာ့နိယာမ တရားများဖြစ်ကြလို့ ကမ္မ၀ါဒီ ဖြစ်ကြတဲ့ ရသေ့သူတော်ကောင်း၊ လူသူတော်ကောင်းတွေက ဆရာအဆက်ဆက်၊ တပည့် အဆက်ဆက် အစဉ်အလာ ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သမထ ဘာဝနာသည်ပင် သာသနာပ တရားဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင် မမွေးဖွားမီကပင် ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဓန မင်းကြီး ကိုးကိုယ်တဲ့ ကာဠဒေ၀ီလ ရသေ့ကြီးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လောကီအဘိညာဉ်ရပြီး ရှေ့ကမ္ဘာ(၄၀)၊ နောက်ကမ္ဘာ(၄၀) မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကာဠဒေ၀ီလကို မည်သူမှ တရားဟောပေးခြင်းမရှိပဲ ဆရာအဆက်ဆက်က ဟောပြခဲ့ပြီး တပည့်အဆက်ဆက်က လိုက်နာကျင့်သုံးတာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ကာဠဒေ၀ီလ ရသေ့က ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ဖြစ်လို့ တာဝတိံသာ တတ်ပြီး ဆွမ်းခံလေ့ရှိပါတယ်။ ဘုရားလောင်းဖွားမြင်ကြောင်းကို ကြားကြားချင်း သုဒ္ဓေါဓန မင်ကြီး၏ နန်းတော်ကို ချာန်နဲ့ ကြွလာပါတယ်။ မင်းကြီးက သားတော်ကို ရှိခိုးခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘုရားလောင်းရဲ့ ခြေတော်အစုံဟာ ရသေ့ကြီးခေါင်းပေါ်မှာ တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ သည်တော့ ရသေ့ကြီးက ဘုရားလောင်းကို ရှိခိုးပြီး ရယ်လဲ ရယ်ပါတယ်၊ ငိုလဲ ငိုပါတယ်။ ရယ်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ သတ္တ၀ါတွေ ဘုရားကို ဖူးတွေ့ရလို့ အကျွတ်တရားရကြတော့မယ်လို့ တွေးဆပြီး ၀မ်းသာ အားရရှိတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ငိုရတဲ့ အကြောင်း ကတော့ ဘုရားမဖြစ်ခင်မှာ မိမိသေဆုံးပြီး အရူပဗြဟ္မာဘုံ (ရုပ်မရှိပဲ နာမ်ပဲရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ) မှာ ဖြစ်ရတော့ မယ်၊ ဘုရား၏ တရားတော်ကို မနာကြားရတော့ပဲ တမဂ်၊ တဖိုလ် မရနိုင်တော့ပြီလို့ သိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှ စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ ရှေ့ကမ္ဘာ(၄၀)၊ နောက်ကမ္ဘာ(၄၀) မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ရသေ့ကြီးသည်ပင် ဘုရားပွင့်တော့မယ့် အချိန်တိုကာလလေးကို မစောင့်နိုင်ပဲ သေဆုံးရရင်၊ အခုအချိန်မှာ အသက်ကို ရှည်အောင်ဆွဲဆန့်ပြီး နောက်ဘုရားကို စောင့်နေတယ် ဆိုတာတွေသည် သဘာဝ မကျပါဘူး)။
အနှစ်ချုပ်ရသော်.. သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် မယ်တော်မာယာ ၀မ်းမှာ ဇာတိနှင့် စခဲ့ရသဖြင့် မလ္လာမင်းတို့၏ အင်းကြင်းဥယျာဉ်တွင် သက်တော်ရှစ်ဆယ်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခံရလေပြီ။ သို့အတွက် မဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ရမဲ သေခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါပြီ။ သေတာ၊ နေတာ၊ အားထုတ်တာသည် အတူတူပါပဲလို့ သဘောပေါက်ထားပါ။ အားထုတ်တာကတမျိုး နေတာက တမျိုးဖြစ်နေရင် မဟုတ်သေးပါဘူး။ (ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြည့်ပါ)။ နေတတ်၊ သေတတ်တယ်ဆိုတာ အားထုတ်တတ်လို့ပါ။ ပြောင်းပြန်ဆိုရရင် အားထုတ်တတ် ရင် နေတတ်၊ သေတတ်ပါတယ်။ နေစဉ်၊ နေ့စဉ်မှာ သာသနာနဲ့ ကြုံမှသာ သိခွင့်ရတဲ့ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ အလုပ်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပါ။ သို့မှသာ သာသနာတွင်းသား ပီသပါမယ်။
ယခုလို တရားဓမ္မများ လွယ်ကူစွာ နာယူ လေ့လာနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ရရှိထားသော အခွင့်အရေးကို အကျိုးရှိ အောင် အသုံးချတတ်ကြပါစေ။ မိမိလုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ကောင်းစွာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ခြင်းသည် ၃၁ဘုံ ဆိုတဲ့ မိုးမှောင်ကျနေတဲ့ တောကြီးထဲက ထွက်မယ့်လမ်းကို သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် တရားတော်များကို ယခုအချိန်မှာပဲ နာယူကြပါ။
မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများကို နာယူနှလုံးသွင်းကြပါ။
~ ငါသည် မုချသေရမည်၊ အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည်။
~ အသေမဦးခင် ဉာဏ်ဦးစီးပြီး ၀ိပဿနာ အားထုတ်ပါ။
~ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို အလွဲသုံးစား အချိန်တွေ မဖြုန်းပါနဲ့။
~ မနေ့ကထက် ကနေ့ သေဖို့ တစ်ရက်နီးသွားပြီ။
~ ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါးမရွေးနဲ့၊ သူတော်ကောင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်ဟာ မင်္ဂလာ အချိန်လို့ မှတ်ပါ။
~ တဏှာလောဘခိုင်းတာ လုပ်နေလျှင်၊ သေရင် အပါယ်ရောက်မယ်။
~ ကိစ္စဟူသ၍ မဂ်တား၊ ဖိုလ်တားလို့ မှတ်ပါ။
~ တရားနာနေတဲ့ အချိန်ဟာ မတရားအလုပ် မလုပ်တဲ့ အချိန်ပဲ။
စာဖတ်သူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ၍ အနေတတ်၊ အသေတတ်၊ အားထုတ်တတ်တဲ့ သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ…။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 10.2.094ရေးသားခဲ့ရန်